Napoleon-kii Aasaasay Boqortooyada Sucuudiga - #1Araweelo News Network | #1Araweelo News Network
Nonmember 9 1953 waxa geeriyooday Boqor Cabdicasiis Aal Sucuud, oo ahaa aasaasihii dawladda Sucuudiga oo uu dhismaheeda bilaabay 1902 ilaa kama dambaystii uu ku dhawaaqay dhismaha boqortooyada Sucuudi Carabiya 1932.
Cabdicasiis Aal Sucuud wuxu Jeeniweri 1876 ku dhashay magaalada Riyaad oo qoyskoodu ka talin jiray, laakiin waxa maamulkoodii jabiyey qoys kale oo la odhan jiray Aal Rashiid oo xukumi jiray magaalada Xaa’il oo ku taal gobolka Najd oo loollan ka dhaxeeyey. Waxaanay isaga oo aan toban jir gaadhin qoyskoodii ka qaxeen Riyaad.
AKHRI: Maraykanka Oo Dalkiisa Ka Masaafurinaya Saraakiisha Sucuudiga Ee Lagu Tabbabaro Dalkiisa Kadib Markii Lala Xidhiidhay Al-Qaacida
Image caption Khariidad muujinaysa Sucuudiga
Bishii Sibtember waxa u suurto gashay inuu magaalada Xaa’il oo ahayd qalcaddii ugu dambasay ee ay haysteen reer Aal Rashiid qabsado waxaanu si buuxda gacanta ugu dhigay gobolka Najd. Isla sannadkaa ayaanu Cabdicasiis isku caleemo saaray Suldaanka Najd.
Hase yeeshee ciidankii Aal-Sucuud waxa uu galay magaalada Daa’if iyo Makka sannadkii 1924 laakiin waxa difaac adag galay ciidamadii Jiddah joogay oo ciidamadiisu go’doominayeen ilaa 17 Diisember 1925.
Image caption Kulankii Boqor Cabdicasiis iyo Madaxweynihii Maraykanka Roosevelt Lahaanshaha sawirka BRITANNICA